Qeybta 1: Miyuu Samsung telefoonada gacanta MP4 taageero?
Qeybta 2: Waa maxay sababta aan telefoonka Samsung ma furi kartid video MP4 ah?
Qeybta 3: MP4 ciyaaryahan app for Samsung
Qeybta 4: Sida loo ciyaaro MP4 on Samsung TV?
Samsung telefoonada gacanta samayn taageeraan qaab MP4 ah. Iyadoo horumarinta ee technology, telefoonada dambeeyay Samsung Galaxy soo saaray hoos taxane ah ma aha oo kaliya taageero ku siiyaan MP4 laakiin sidoo kale H.264, AVI, WebM, 3GP iyo qaab wmv. Tani waa sababta dadka isticmaala soo bixi kartaa oo ciyaaro videos kala duwan oo ka dhan internet-ka oo iyaga ku raaxaysan ay Samsung telefoonada gacanta.
Dhibaato caadi ah in inta badan dadka isticmaala telefoonka mobile Samsung ka fool leeyihiin waa awood la'aanta ah ay telefoon u ciyaaro videos MP4. Iyadoo Samsung si rasmi ah u taageertaa qaab MP4 ee aaladaha ay ka badan maxaad dadka isticmaala in ay la kulmaan dhibaatada leeyihiin, mid ka mid weydiisan kartaa. Tan waxa u sabab xaqiiqada ah in halka MP4 waa heer, files MP4 la encoded karaa iyadoo la isticmaalayo noocyo kala duwan oo codecs kala duwan. Samsung taageertaa isticmaalka qaadashada file ah H.263 codecs ama H.264 AVC halka oo dhan codecs kale ma taageersana. Sidaas darteed waa aad u badan ay suuragal tahay in halka file ah waxaa laga yaabaa in MP4, mobile Samsung telefoonka laga yaabaa in aanay awoodin inay u ciyaari sabab u ahaa xaqiiqada ah in la encoded isticmaalaya codecs in Samsung ma taageeri aan waqtiga xaadirka ah.
Iyada oo awood u leh inay ciyaari dhan codecs iyo cayn kasta oo video eegin ay qaab files, RockPlayer 2 waa xiddiga dhagaxa weyn ee Android ee adduunka ka mid ah ciyaartoyda warbaahinta. RockPlayer2 waa fududahay in la isticmaalo iyo fooridaa ah interface user is-dhexgal iyo xoogbadan. User ayaa astaysto UI iyo sii kaliya gacanta ku ah in uu doonayo in uu sii iyo saaro dadka kale, la xorayn, ilaa meel shaashadda. RockPlayer2 sidoo kale taageertaa Customization iyo subtitles on qalabka Android. Muuqaalka aad u xiiso badan oo kala RockPlayer2 ka xafiiltamaan ay tahay awooddiisa ah inuu wareejiyo files warbaahinta waaweyn ka mid qalab android in kale. Si aad u isticmaasho habkaani aad u baahan tahay oo kaliya in la rakibo RockPlayer2 in il iyo caga qalabka android iyo aad noqon doonaa wanaagsan si ay u tagaan.
Download Link waa halkan
MX Player waa ciyaaryahan warbaahinta kale oo weyn android in loo isticmaali karaa inuu u ciyaaro files MP4 aan loo eegayn waxa ay kelmadaha, on a Samsung mobile phone. Ciyaaryahanka MX waxay bixisaa kelmadaha hardware iyo software labadaba; Muuqaal ah in ciyaartoyda warbaahinta kale android aadan lahayn. Sireed hardware wuxuu kuu ogol yahay in ciyaaryahanka uu u helaan saamayn isku mid ah oo ku saabsan waxqabadka iyo nolol batariga ee telefoonka gacanta, iyadoo ciyaaryahankii warbaahinta default. Shaqeynta kale oo weyn oo ay bixiyaan Player MX waa taageerada ay u hal, waxa uuna ku Bawdada Processor muhiimka ah. Interface user waa mid aad is-dhexgal iyo saaraysaa baahida loo qabo qoto dheer qodaya galay bedeley iyo submenus. Waxaad si fudud u qabsato kartaa mugga, baaraan dhalaalka by kabacdi farta shaashadda dhinaca gaar ah. Oo weliba aad, digsi karo iyo zoom, rogto subtitles halka dhamaan shaashadda loo maqli ka.
3. VLC u Android
Iyadoo maamulka playlist weyn iyo taageero ballaariyey macno nooc kasta oo file warbaahinta, VLC u Android yahay waa in uu leeyahay ciyaaryahan warbaahinta u Samsung dadka isticmaala telefoonka mobile. Sida version desktop-ka, waa xor ah oo si sahlan loo isticmaali oo ku yimaadda preloaded farabadan of hawlaha waxtar leh sida Chromecast mirroring taageero iyo awood u leeyahay inuu furo durdurrada network ka URL ah. VLC u Android leedahay fursado loo maqli karo awood badan sida barbaraha maqal ah, taageero Cinwaan, saacad hurdo oo awood u leh inay beddesho hurdo loo maqli karo ay la socoto awoodda ay ku boodaan ah wakhti gaar ah. Its awood u ciyaaro audio iyo video labadaba la awoodiisa weyn u kala Sooco ka ciyaartoyda kale ee warbaahinta. VLC u android si toos ah u yeesho oo dhan audio iyo video files joogo in qalab android aad galay fayl ay ka soo jeedaan halkan ka samaynta helaan kuwaas files mid aad u fudud gudaha ka ciyaaryahan warbaahinta lafteeda. Markaasaa files warbaahinta ee loo qoondeeyey oo ku salaysan ay metadata, hawl quruxsan aasaasiga ah, laakiin mid ka mid ah oo aad u faa'iido aad.
Hadda oo aan ognahay in xuduudaha u soo gudbiyay awoodda kelmadaha qayb ka mid ah qalabka Samsung iyo sida loo xallin lahaa dhibaatada ka on Samsung telefoonada gacanta, diyaar ayaan u nahay in ay qaataan tallaabo hore loo sii gudbayo in aynu mawduuceena soo socda. Samsung TV, sida Samsung telefoonada gacanta, waa qalab aad loo jecel yahay oo ay shirkada la malaayiin users oo dhan dunida dacaladeeda. Si aad u ciyaaro MP4 on Samsung TV sidoo kale noqon kartaa yara ee gumaarka ah sida Samsung telefoonada gacanta. Sababtan awgeed Wondershare ayaa la timaado software aad u fiican si loo xaliyo dhibaatooyinka oo dhan in aad ka fogaadaan inay awoodaan inay u ciyaari MP4 on your TV Samsung. Si aad u hesho knowhow ah tan software cajiib ah iyo si aad u hesho in la ogaado in ay fiican oo shaqeynaya, si fudud u raaci halkan .
> Resource > Samsung > 4 Waxyaabaha ay tahay in aad Ogaato ku saabsan MP4 iyo Samsung